[Oqalayo] Indlela Yokuhweba Isikhathi Esizayo seBinance - Umhlahlandlela Wabaqalayo Ekuhwebeni Kwesikhathi Esizayo
[Oqalayo] Indlela Yokuhweba Isikhathi Esizayo seBinance
Ungayithengisa Kanjani Ikusasa leBinance
Umhlahlandlela Wabaqalayo Ekuhwebeni Kwesikhathi Esizayo
Ekuhwebeni kwesikhathi esizayo, ungabamba iqhaza ekunyakazeni kwezimakethe futhi usebenzise amathuba afinyelela ku-125x ukwenza inzuzo ngokuqhuba izinkontileka zesikhathi esizayo ezinde noma ezimfushane.
Izinkontileka zesikhathi esizayo ziyathengwa ngokulindela ukuthi inani lazo lizokhuphuka ngokuzayo. Ngakolunye uhlangothi, umhwebi angathengisa inkontileka yesikhathi esizayo ekubhejeni ukuthi intengo izokwehla ngokuzayo.
Ku-Binance, ungasebenzisa amandla ukunciphisa ubungozi noma inzuzo ezimakethe eziguquguqukayo. Landela lezi zinyathelo ukuqala ukuhweba ngeBinance / Binance Futures.
Faka i-USDT / BTC ku-akhawunti yakho yesikhathi esizayo ngomugqa.
Khetha ileveli oyifunayo yokusebenzisa
Khetha uhlobo lwe-oda olufanele (thenga noma thengisa)
Khombisa inani lezivumelwano ongathanda ukuba nazo.
Nasi isibonelo sendlela yokwenza imali ngokuhweba kwakho kwesikhathi esizayo.
I-BTC / USDT iyaqhubeka:
Isifinyezo se-BTC / USDT:
Emakethe yendawo, abathengisi bangazuza kuphela lapho inani lezimpahla zabo landa. Ngokuphambene, ngokuhweba kwesikhathi esizayo, ungazuza ngazo zombili izindlela lapho inani lempahla likhuphuka noma liwa.
Ipulatifomu yokuhweba ye-Binance Futures ivumela abahwebi ukuthi bakhethe imodi yothango efinyelela ku-125x.
Qala ukuhweba ngeBinance Futures namuhla!
Ikhodi yokudlulisa ye-Binance 20%
Ncoma okuthunyelwe okwengeziwe
Categories I-Binance Post navigation
วิธีแลกเปลี่ยน Binance Futures
[Người mới bắt đầu] Cách giao dịch Binance Futures